लेन मिच्ने मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई ट्राफिकले न चिट काट्न सके न त सलाम नै ठोक्न सके ! – Akhabar Dainik
लेन मिच्ने मन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीलाई ट्राफिकले न चिट काट्न सके न त सलाम नै ठोक्न सके !
काठमाडौं, पुस १९ । सानालाई ऐन ठूलालाई चैन भन्ने नेपाली उखानैं छ नी । हो, यो उखान चरितार्थ गरिदिएका छन् सहरी विकासमन्त्री अर्जुन नरसिंह केसीले । मन्त्री र सरकारी उच्च ओहदाका अधिकारीहरुले बेला बेलामा आफ्नो पदको दुरुपयोग गर्दा सर्वसाधारण जनताले भने हैरानी मात्र खेप्नु परेको छैन, जनता प्रत्यक्ष मारमा समेत पर्ने गरेका छन् ।
मन्त्रीले आफु सवार गाडीको कुनै वस्तै नगरी यू टर्न र लेन परिवर्तन गर्दा काठमाडौंको बत्तीसपुतली सडकमा यात्रा गर्ने यात्रु मात्र मारमा परेरनन्, बिरामी बोकेर अस्पताल हिँडेका एम्बुलेन्ससमेत सडकमा निकै बेर रोकिनु पर्र्यो । कुरा हो गत शुक्रबारको । एक जना कांग्रेस कार्यकर्ताले संचालन गरेको पार्टी प्यालेसमा भोज खान हतारिएका मन्त्री केसीको हतारोले सडकजाम हुँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो ।
गौशालादेखि बत्तिसपुतलीको एक पेट्रोल पम्प सम्म गाडी पुरै जाम थिए । हतारोमा रहेका मन्त्रीलाई उक्त जामले छुने कुरै भएन । उनले गाडी चालकलाई बिपरित लेनमा जान निर्देशन गरे ।
लेन अनुसाशन पालन नगरेकामा ट्राफिक हवल्दारले चिट काटिरहेका थिए । ट्राफिक व्यवस्थापन गर्न नसकेर असिन पसिन भएका हवल्दारले लेन अनुसाशन उल्लङ्घन गरेको मन्त्रीलाई न त चिट काट्न सके न त सलाम नै ठोक्न सके । यत्तिकैमा बिपरित दिशाबाट बिरामी बोकेको एम्बुलेन्स आयो तर मन्त्रीको पछुवा गाडीले बाटो छेकी सकेको थियो । जस कारण सडक आधा घण्टा बढी जाम हुन पुग्यो ।d.getElementsByTagName(‘head’).appendChild(s);